Guddi wasiiro oo loo xil saaray ka soo tala bixinta qorshaha amniga oo tagey Wadajir… – Hagaag.com
Guddi wasiiro oo loo xil saaray ka soo tala bixinta qorshaha amniga oo tagey Wadajir…
Posted on 1 Abriil 2019 by Admin in National // 0 Comments
Waxaa xalay degmada Wadajir kulankii u horeeyay ku yeeshay Guddi Wasiiro ah oo Ra’iisul Wasaare Kheyre u xil saaray ka soo tala bixinta qorshaha Amniga Caasimadda, kuwaasoo qiimeyn iyo indha indheyn ku sameeyay xaalada amniga degmada Wadajir.
Kulanka ayaa Guddiga waxa ay warbixin Amniga ku saabsan ay ka dhageysteen Maamulka Gobolka Banaadir iyo kan degmada Wadajir, iyagoo faah faahiyay sida ay u socoto howsha sugida amniga Muqdisho, isla markaana soo bandhigay caqabadaha qaar ee heysta si wax looga qabto.
Kulanka kadib, Guddiga waxay soo kormeereen Kontoroolada ay Ciidamada ammaanka ku sugan yihiin ee ee laga xaqiijinayo Amniga, iyadoo meelaha ay tageen ay ka mid tahay Kontoroolka Isgoyska Dan Wadaagta ee laga ilaaliyo Garoonka diyaaradaha Muqdisho.
Gudoomiye Kuxigeenka dhinaca Amniga iyo Siyaasada gobolka Banaadir Maxamed C/llaahi Tuulax ayaa kulanka kadib warbaahinta u sheegay in maamulkooda shirka ay ku soo bandhigeen baahidooda ku aadan in la xaliyo Ciidamada ku sugan 17-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Guddigan heerka Wasiir waxaa ku jira Wasiirada Amniga, Gaashaandhiga, Kaluumeysiga, Batroolka, Ganacsiga, Wasiiru dowlayaasha Waxbarashada iyo Duulista Hawada, kuwaasoo la doonayo inay kormeero ku tagaan guud ahaan degmooyinka Muqdisho, si ay warbixin dhameystiran uga keenaan xaalada amni.